नेपाल आज | युद्धमा छोरा गुमाउने एकमात्र माओवादी हाइकमाण्ड, सम्झनामा बोगटीपुत्र रबि
परिवार प्रोफाइल मेरो परिवार मेरो कथा समाचार समाज
युद्धमा छोरा गुमाउने एकमात्र माओवादी हाइकमाण्ड, सम्झनामा बोगटीपुत्र रबि
बिहिबार, ०९ असार २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
२०५९ साल असार ७ गते धादिङको सत्यवति गाविसको एक घरमा रबि बोगटी आफ्ना साथीसहित छाल पत्रिका प्रकाशनको काममा व्यस्त थिए । चारैतिरबाट सुरक्षाकर्मीले घेरा हालिसकेका थिए । कलममा मस्त रबिमाथि पछाडिबाट फायरिङ भयो । आफ्नै शरीरको रगतले रबिले माटोमा लेखे–माओवादी जि । माओवादी जिन्दावाद लेखेर नसक्दै उनको मृत्यु भइसकेको थियो । नेताहरुले छोराछोरी सुरक्षित राखेको, लुकाएर पढाएको, विदेश पठाएको चर्चा व्याप्त थियो । रबि साधरण थिए । अरु कार्यकर्ताझै खटिन्थे । सायदै कसैले सोचेको थियो मारिने उनी माओवादीका शीर्ष नेताका छोरा थिए ।
पश्चिम नेपालको कमाण्ड सम्हालेका माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकरका एकमात्र छोरा रबि मारिएको ठीक १४ बर्ष पुगेको छ । रबिले मर्दामर्दै लेखेको माओवादी जिमा न्दाबाद थपिन सक्यो या सकेन समीक्षाको विषय छ । तर, छोरासमेत गुमाउने गरी युद्धमा होमिएको बोगटी परिवार आर्दशको मानक बनेको छ । पोष्टबहादुर बोगटीले चाहेको भए छोरालाई सुरक्षित ठाऊंमा खटाउन सक्थे । लुकाउन सक्थे । आफैंसंग लिएर हिड्न सक्थे । अरु नेताले सुरक्षित शैली खोजेकै थिए । रक्तमुछेल यात्रा र बलिदानीको कथा अरुका छोराछोरीलाई जति नै पढाएपनि आफ्ना छोराछोरी सुरक्षित रहुन् भन्ने हुनेनै भयो । तर, पोष्टबहादुर अपवाद भएर निस्किए । अरुका छोराछोरीको कमाण्ड गर्नेले आफ्नो छोरापनि कसैको कमाण्डमा छोड्न सक्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी सोचले उनी निर्देशित थिए । रबि आफ्नो बाटो आफैं बनाउन चाहन्थे । बाबुको बुई चढेर राजनीतिमा उक्लिन उनी तयार भएनन् ।
राजनीतिमा बोगटी परिवार २००९ सालमा जन्मिएका पोष्टबहादुर बोगटी सानैदेखि शालिन तर दृढनिश्चयी थिए । त्रिशुलीको माछापोखरीमा सामान्य जागिरे थिए । पारिवारिक पृष्ठभूमी सामान्य थियो । हक्की स्वभावका कारण उनको परिचय पृथक बन्दै गयो । उनी तुप्चेबाट हिंडेरै कार्यालय जान्थे । बीच बाटोमा पथ्र्यो आंगाबुटार । आंगाबुटारकी राममाया अलिकति हुनेखाने परिवारकी कलकलाउंदी युवती थिइन् । बोगटी दिनहुं चियो गर्थे । बिवाहको प्रस्ताव आयो । शुरुमा राममायाको परिवार सहमत भएन । पोष्टबहादुरको शालिन तर दृढ स्वभावबाट प्रभावित राममायाले दायांबायां सोच्दै सोचिनन्, बिहेका लागि रांजि भइन् ।
बिहेको चर्चा चल्दै गर्दा दुबैको मायाप्रिति बसिसकेको थियो । २०३६ साल मंसिरमा उनीहरुको विहे भयो। २०३८ सालमा रबि जन्मिए । त्यसपछि दुई छोरी प्रतिभा र प्रभा जन्मिए । राममायाले पोष्टबहादुर राजनीतिमा सक्रिय रहेको भेउ पाउंदै गइन् । आर्दश जीबनका धनी पोष्टबहादुरको प्रभाव उनीमाथि झन्झन् बढ्दै गयो । उनी विस्तारै राजनीतिक सहयोगी बन्न पुगिन् । माओवादीले युद्ध थाल्ने भयो । २०५२ सालदेखि बोगटी पूर्णतया भुमिगत भए । राममायाको कांधमा परिवारको पूरै जिम्मेवारी आयो । छोरी ससानै थिए । रबि भर्खर किशोरवयमा चढ्दै थिए । त्यसमाथि सुरक्षाकर्मीको धरपकड नियमितजस्तो भइरहन्थ्यो । राममाया आफैंपनि भुमिगत हुनुपर्ने स्थिति आइलाग्यो । नाबालिका छोरी र छोरालाई छाडेर उनीपनि भुमिगत भइन ।
कैयौंका लागि प्रेरणा बनेका पोष्टबहादुरको प्रभाव छोरामा नपर्ने कुरै भएन । उनीपनि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए । प्रहरीले उनलाई पटकपटक गिरफ्तार ग¥यो । उनलाई आत्मसमर्पण गर्न भनियो । साधरण जीबन जिउंनका लागि सुझाव दिइयो । प्रलोभन देखाइयो । राज्यलाई थाहा थियो रबिलाई फकाउन सक्दा रबिमार्फत आमयुवालाई देखाउन सकिन्थ्योः नेताको छोरा त युद्धबाट बिमुख छ तिमीहरु किन पछि लागिरहेका छौं ? पढ्नमा तेज थिए उनी । एसएलसीमा प्रथम श्रेणी ल्याएका थिए । प्लस टुको पढाइ लुकिछिपी गरेका थिए । नतिजा राम्रै आएको थियो । पढाइबाटै केही गर्न सक्ने पृष्ठभूमी थियो । रबि डग्मगाएनन् । भुमीगत जीबन शुरु गरे । ‘उनी कहां छन् ? के जिम्मेवारी दिइएको छ ?’ पोष्टबहादुरलाई खाशै चासो दखाएनन् । छोराको चिन्ता लाग्थ्यो, तर क्रान्तिमा परिवार भन्ने हुदैनथ्यो । बाबुछोरा भिन्दाभिन्दै मोर्चामा थिए । रबि मारिए ।
निधनको खबर रबिको निधन हुंदा पोष्टबहादुर पाल्पा आसपासको क्षेत्रमा थिए । राममाया लखनउमा थिइन् । एककान दुईकान मैदान हुंदै रबि मारिएको खबर पार्टीपंक्तिमा फैलियो । लखनउसम्मपनि पुग्यो । तर, राममायालाई भनिएन । रबिको निधन भएको खबर प्रकाशित भएका पत्रपत्रिका लखनउ पुगिहालेपनि लुकाइन्थ्यो । छोरा मरेको खबर रामामायालाई सुनाउने साहश कसैसंग रहेन । पार्टीका साथीहरुले निष्कर्ष निकाले दिवाकर कमरेड आफैंले सो खबर सुनाउंनुहुनेछ । २ महिनापछि लखनउ आइपुगे पोष्टबहादुर । वियोगको पोको खुल्दा राममायाको मुटुले ठाउंm छाड्यो । तर, युद्धको आवेगसंग अभ्यस्त उनले मन सम्हालिन् । युद्धमा मारिएका रबिजस्तै सयौं छोराछोरीलाई सम्झिइन् ।
अहिले नेताका साथमा उनीहरुका छोराछोरी घुमफिर गरेको देख्दा राममायालाईपनि रबिको यादले सताउंछ । एकमनले सोच्छ, त्यतिबेला थोरैमात्र ख्याल गरेको भए छोरालाई बचाउंन सकिन्थ्यो । अर्को मनले भन्छ, तर त्यसो गर्नु क्रान्ति र आर्दशमाथिको गद्दारी हुन्थ्यो । उनको मन कहिले छोरा गुमाएकोप्रति भारी भएर आउंछ । कहिले छोराको सहादती सम्झदा गर्वले छाति ढक्क फुल्दछ । क्रान्ति र आर्दशको अग्नीपरीक्षामा उर्तिण भएको आभास हुन्छ ।
प्रभावशाली पोष्टबहादुर पोष्टबहादुर जतिको सादा र स्वच्छ छबीको नेता माओवादीमा सायदै अर्को कोही थियो वा रहेको छ । उनले एकमात्र छोरासमेत गुमाए । क्रान्तिमा सबै गुमाउन तयार रहेको उदाहरणका रुपमा उनी स्थापित भए । छलकपटभन्दा टाढा रहे । प्रचण्डको सामुन्नेमा प्रचण्डको आलोचनापनि गर्न सक्ने तर प्रचण्डका विरुद्धमा हुने पर्दापछाडिका खेललाई सधैं परास्त गर्न सक्रिय रहने उनको स्वभाव थियो । प्रचण्डका अति विश्वासिला सहयोद्धा थिए पोष्टबहादुर । पोष्टबहादुर चमकदार भाषण गर्न जान्दैनथे । नत शब्दजाल बुनेर अभिव्यक्ति दिन्थे । तरपनि उनका शब्दशब्द पार्टीमा सुनिन्थे ।
किनकी उनी जे बोल्थे, त्यही थिए । पार्टीको महासचिव भएकै बखत बोगटी बिते । सक्रिय राजनीतिमा रहेका बोगटीको हृदयघात र ब्रेन ह्यामरेजका कारण निधन भयो । त्यसयता राममाया थप पीडामा छिन् । दुई छोरीकी आमा राममाया समानुपातिक सांसद हुन् । पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छिन् । परिवारलाई नै घर ठानेको उनको भनाइ छ ।
रबिको सम्झनामा अक्षयकोष राममाया पति पोष्टबहादुर बोगटीको आर्दश पदचांप मेटाउन नदिन सक्रिय छन् । पार्टीभित्र अवसरवाद हावि भएको बेलामा उनका सामू आफ्नो छोरा र छोराजस्तै हजारौंको बलिदानीको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व छ । उनी पार्टीमा सोका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने बताउछिन् । संगै, छोराको स्मृतिमा केही गर्ने चाहना राखेकी छिन् । रबि पढेको तुप्चेस्थिति चण्डेश्वरी उच्चमाध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई केन्द्रीत गरि अक्षय कोष खडा गर्ने उनको सोच छ । पार्टी नेतृत्वमा रहीसकेका पति पोष्टबहादुरको नाममा पार्टीले प्रतिष्ठान गठन गरेको छ ।
दुई छोरीले बुबाको नाममा संयुक्तरुपमा अक्षयकोष खडा गर्ने सोच बनाएका छन् । रबिको रगतले लेखेः माओवादी जि । बोगटी परिवारलाई लागिरहन्छ, रबिले न्दावाद लेख्ने जिम्मेवारी आफुहरुलाई छोडेका छन् । मृत्युमा पनि पार्टीको जय देख्न रबि १४ बर्ष पुग्दै गर्दा माओवादी दलदलमा फसेको छ । दलदलमा फसेको माओवादीलाई भासबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ वा सकिदैन ? बोगटी परिवारलाई असार सातले झनै पिरोल्ने गर्दछ । माओवादीमाथि बडारिएको कालो बादलमा चादनीको रेखा देखेको राममायाको भनाइ छ ।
paosta bahadur bogati rabi bogati ram maya bogati